Fanisam-bahoaka nataon’ny INSTAT Miisa 25.680.342 ny Malagasy
Fifaninanana « Miss Tourisme » Hasiana isan-taona
Vita omaly tetsy amin’ny Pousse pousse Antaninarenina ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasan’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ilay fifaninanana hatsaran-tarehy sy bika amdiany
AMORONANKONA AMBOHIMANAMBOLA Ho vita tsy ho ela ilay toby famokaran-drano fisotro madio
Na dia nihemotra kely aza fa tsy vita tamin’ny 10 septambra lasa teo ny asa fanamboarana tobim-pamokarana sy fanadiovan-drano eny Amoronankona,
Fitrandrahan’ny Base Toliara Manaitra ny filoham-pirenena ny CRAAD-OI
Mamelà anay hanaitra anao maika mahakasika ny “radioactivité” ao Ranobe izay itrandrahan’ny tetikasa Base Toliara fasimainty ao amin’ny Faritra Atsimo Andrefana mba ahazoana ilménite sy zircon ary rutile,
Antananarivo Azo vahana tsara ny olan’ny fako
Araka ny lalàna mifehy azy sady voasoratra amin’ny andinim-pitantanana sy eo amin’ny rafitra dia anjaran’ny minisitera fa tsy an’ny kaominina akory ny fisahanana ny fitantanana ny fako,
Tsimialonjafy, Ampamarinana Nozahana akaiky ireo faritra ahiana hisy fihotsahana
Efa miasa fatratra sahady ny sampana mpamonjy voina etsy Tsaralalana amin’izao na dia vao volana septambra aza isika.
Natolotra ny filankevitry ny minisitra omaly ny fampahafantarana ny isan’ny mponina vonjimaika araka ny fanisana ny mponina vita ny faran’ny taona 2018 ary navoaka tamin’ity taona ity notanterahan’ny INSTAT.
Fantatra ary fa 25.680.342 ny Malagasy monina eto Madagasikara amin’izao fotoana ka 13.013.190 ny vehivavy ary 12.666.952 ny lehilahy. Ny vehivavy izany no maro an’isa. Ny faritanin’Antananarivo no be mponina indrindra izay mahatratra 7.264.922 . Amin’ny faran’ny taona 2019 vao ampahafantarina ny daholobe ny totalin’isa farany voamarina satria mbola misy ny fanamarinana sy fanamafisana ireo tarehimarika voaangon’ireo mpanao fanadihadiana, izay nampahafantarina tao anatin’ny rakiboky milaza ny isan’ny mponina vonjimaika sy ny toetry ny tahan’ny fitombon’ny mponina isan-tsokajiny. Tena ilaina eo amin’ny fitantanana ny firenena sy ny fandrafetana paikady ara-toekarena ny isan’ny mponina. Tsy ny isa faobe fotsiny moa no hivoaka fa mandeha amin’ny sokajiny : lahy sy vavy na koa hoe ankizy sy tanora. Eo ihany koa ny isan’ny trano na toeram-ponenana, ny olona an’asa sy ny tsy an’asa ary ny zavatra maro. Ny taona 1993 no nisy fanisam-bahoaka farany natao teto Madagasikara.